Nangona kwakutshanje, kungekudala ukungabonakali kokuvavanywa koluntu, amathambo aqina ngakumbi nakwixesha lethu langoku. Ngaphezu koko, ukuzalisa tattoo - inzondo yabasetyhini kunye namantombazana abo bonke ubudala. Kwaye sele ungamangali kuyo yonke imidwebo eyahlukeneyo emzimbeni wesigxina sesintu.
Kodwa naziphi na iimeko, inxalenye enkulu yamantombazana ezithandwayo, okanye ahlale enganelisekanga ngesiphumo, okanye azisole ngokucacileyo ngale ngcamango. Kwaye ke kufika ingcamango: indlela yokulahla itottoo iphephile kwesikhumba? Ngaba kunokwenzeka ukulahla itottoo ngaphandle kwendlela?
Izindlela ezingenakuthenjwa zokulahla iidoti
Akunangqondo ukuthatha tattoo ekhaya ngokuzimela, ngaphandle kokushiya umkhondo emzimbeni. Nangona itottoo ifakwe kutshanje kwaye i-kraskane igqityiwe ekugqibeleni, kusekho ukukhawuleza ukuzama ukusula okanye ukuguqula umfanekiso. Kwimeko enje, oko kuvela kule nto i-bloy blot. Ngoko ke, enye indlela okanye enye, kuya kukhethwa ukuba ugqoke nantoni na, nangona kungabonakali kangako itekisi, kunokuba uhlale kunye nepotta ebonakalayo.
Nangona kukho ezinye iindlela zokususa iitoto ezivela esikhumbeni ekhaya, kodwa kungekho ngaphandle kweendlela ezibuhlungu kunye nezikrakra eziza kuba nawe ngexesha lobomi. Kukho iindlela ezimbini eziqhelekileyo: ukusebenzisa udongwe, okushiya ukutshiswa, kunye nokusebenzisa isepha ye-alkaline, eya kubandakanya i-hehermal and chemical. kutshisa. Ingundoqo yale ndlela ekubunjweni kwezilonda kwesikhumba, kunye kunye nendawo yolusu eya kuhla ngayo imifanekiso.
Emva kwezi ndlela ezidakisayo zokususa ama-tattoos, uya kufuna unyango logqirha kunye nodokotela we-dermatologist. Akukho ziqinisekiso zokuba ukuba ngoncedo lwezi nkqubo ezibuhlungu i-tattoo iya kupheka ngokupheleleyo, kodwa ngokuqinisekileyo uya kufumana umkhondo omzimba.
Iindlela zendlela yokucima amathambo
Kukho, ke, indlela enobuntu yokususa tattoo: iya kubusi. Iziko, i-salon okanye kwindawo efanayo ye tattoo. Kwakhona, akungathandabuzeki ukuba ukukrazula iidotto kubaluleke kakhulu kunokugqithisa. Kuthatha ixesha kunye namandla. Ukuba uqinisekile ukuba ikhulu leepesenti ofuna ukulahla itottoo, siya kubelana nge-swami ngeendlela ezintsha zokukwenza.
Kwilizwe lethu elona lona liyiqonda kakhulu yindlela yokucwangcisa ama tattoos. Iqukethe ukuba umthengi ususe indawo yesikhumba apho tattoo igcwele khona, phantsi kwe-narcosis, ngokuqinisekileyo. Oku kwenziwa ngokusebenzisa ilitye ngeengubo zamadayimane okanye i-cutter eyenzelwe ngokukodwa. Okokuqala, susa inxalenye ephezulu yesikhumba, uze uphumule umgca kwaye ude udwelise. Akukho mfihlo yokuba emva kwenkqubo leyo, ukuvuvukala kuyamangalisa, kwaye emva kokuhla kwayo-isilonda esikhulu.
Ayikho into enomdla kukuba indawo yokusebenza emva komzimba kufuneka igcinwe iyinyumba kuze kube yilapho isilonda siphiliswa ngokupheleleyo, njengoko ukuphilisa kukude, malunga neenyanga eziliqela, kukho ingozi yokusulela isilonda. Ngaba akuyi kuba namava amnandi emzimbeni emva kokuphilisa? Oku kubangelwe kumgangatho wobugcisa oqhutywe ukusebenza, nokuba ngaba ubona ubununu.
Izindlela zokurhoxisa i-laser tattoos
Kunokuthenjwa ngakumbi ukusebenzisa indlela yokususa imitha yelanga. Kungekudala, lolu hlobo lwentsebenzo luphawu oluphawulekayo, konke ngenxa yokuba isiseko sale ndlela kukutshatyalaliswa kobushushu obushushu bendawo efunekayo emzimbeni. Kwaye xa isikhumba sinyuka, itekisi iboniswe ngesikhupha esilonda.
Inkqubo yanamhlanje yokusila i-laser esuka kumathambo e-laser isetyenziswe ngempumelelo ukususela ngo-2004, ihluke kakhulu kubangaphambili bayo. Ubungqina bolu bugcisa bukuba ngoku i-laser inefuthe kuphela kwimbala ye-pigment, kwaye kungekhona kuyo yonke indawo apho tattoo ifakwe khona. Ngomqulu ogqityiweyo, ezinye iindawo zepende zikhuphuka, kwaye ezinye zihlukaniswe zibe ziincinci ze-gland kwaye zisuswa emzimbeni ngokwawo. Le ndlela ibizwa ngokuthi i-photovoltaics ekhethiweyo.
Kodwa nangona wenza iphutha xa ucinga ukuba uhambo oluya kugqirha luza kunceda ngonaphakade ukulahla itekisi engalunganga. Kwenzeka ukuba kukho ixesha elide, kwindawo ethile malunga nonyaka, ukukhulula ingxaki enikwe. Okokuqala, itekisi ibonakaliswe, kwaye ihamba ngokukhawuleza, kuze kube yilapho iphethini iphelelwa ngokupheleleyo. Ukongezelela, isigaba sokugqibela senkqubo enje, njenge-photovoltaics, kuxhomekeke kulo:
Iimpawu zePaint: umphumo uya kuba yinto embi kwaye i-tattoo ayikwazi ukunyamalaka ukuba endaweni yezobugcisa zobugcisa, iinoki ukusuka kwijel okanye ipowpoint ipen.
Iinkqubo zokudweba kunye nobunzulu bokukraba: iphethini engabonakaliyo iya kuhlala isemzimbeni ukuba i-tattoo ithatha iindawo ezininzi zesikhumba.
Indawo zeTattoo: zikhona indawo emzimbeni womntu onokuthintela kunqanda, kungakhathaliseki ukuba itotto isuswe njani.
Ngenxa yoko, impendulo engcono kumbuzo wokususa iitotto ngaphandle kwezikrakra ezinzulu kunye nayiphi na impawu kwesikhumba ekhetha i-photovoltaics. Namhlanje yindlela kuphela yokulahla i tattoo ngaphandle kwengozi kwimpilo.
Siyazi ukuba i-US iye yaba ngumsunguli wefashoni yezotto, kodwa bambalwa abayaziyo ukuba malunga ne-50% yabanikazi bamathambo bazisola ngesiphoso esilungileyo sobutsha kwaye bafuna ukurhoxisa tattoo. Ngoko ke, ukuba unesiqiniseko somnqweno wakho wokwenza itekisi, thabatha kakhulu xa ukhetha intsha kunye nochwepheshe. Oku kuya kukunceda ukuba ugweme iindleko eziphathekayo kunye neentloni kwixesha elizayo.
Ibhedi yokulwa no-cellulite kunye namafutha abalulekile
Yiyiphi indlela yokuphulukisa ilungile
Imithetho yokushona kwelanga ekhuselekileyo kunye nendlela yokugcina umthunzi othandekayo ngokusisigxina
Sebenza nge-mastic yabaqalayo
UMilan noAlexandro Kerzhakov benqaba ukuphawula ngamahemuhemu malunga nokungcatsha umdlali webhola
Iimpawu zichaphazela njani ukufumaneka kwemali?
Omnye wobubele bukaBoleyn. Ngengcamango yesikhumba se-soapy
Nini i-Spice Nice 2016? I-Holiday Scenario
Iibisiki ze-orange ezinokutsha
I-glo gloss - isikhali sokukhohlisa!
Yintoni ngokwenene uxinzelelo kunye nendlela yokujamelana nayo